Horudhac: Manchester United vs Crystal Palace… (Ralf Rangnick oo kulankiisa ugu horreeya leylin doona Red Devils & Palace oo guul ka heysata Old Trafford labadii booqasho ee ugu dambeysay) – Gool FM
Ahmed Nur December 5, 2021
(Manchester) 05 Dis 2021. Waxaa caawa markii ugu horreysey naadiga Manchester United hoggaamin doona macallinkeeda ku meel gaarka ah ee Ralf Rangnick iyagoo marti gelinaya naadiga Crystal Palace kulan ciyaareed ka tirsan horyaalka Premier League.
Man United ayaa guuldarro la’aan ahayd labadii ciyaarood ee lasoo dhaafay oo ay mid ka mid ah guuleysatay midna barbarro gashay, waxayna taasi dhigtay booska todobaad ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska iyadoo leh 21 dhibcood, halka Palace ay kaalinta 11-aad ku heysato 16 dhibcood.
Rangnick ayaa kulankiisa ugu horreeya ee Premier League maamuli doono iyadoo aysan Red Devils heysan Paul Pogba, Raphael Varane iyo Edinson Cavani, xilli uu weli shaki ku jiro taam ahaanshaha Luke Shaw.
Dhinaca kale, naadiga The Eagles ayaa weyneysa Joel Ward oo jaalleyaal u aruuray darteed ciyaartan uga ganaaxan, waxaa sidoo kale dhaawacyo kala duwan ku maqnaan doona Joachim Andersen, James McArthur iyo Nathan Ferguson.
Manchester United ayaa guuldarro kala kulantay labadii kulan ee ugu dambeysay oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Crystal Palace, waana in la eg guuldarrooyinkii ay garoonkeeda kaga qaadatay 22-kii is-arag ee ugu dambeysay ee ka dhacay Old Trafford.
Waxay Man United halis ugu jirtaa inay Eagles garaaci weyso saddex ciyaar oo xiriir ah markii ugu horreysay tan iyo markii ay afar xiriir ah garaaci weysey intii u dhexeysay 1925-1970.
Kooxda Manchester United ayaa raadineysa inay labo ciyaarood oo xiriir ah adkaadaan dhammaan tartammada markii ugu horreysay tan iyo soo labashadii Cristiano Ronaldo ee xagaaga.
Macallin Ralf Rangnick ayaa noqon kara macallinkii ugu horreeyay ee Germany u dhashay kaasoo guul gaara kulankiisa ugu horreeya Premier League.
Red Devils ayaa halis ugu jirta inay toddobo guuldarro kusoo gaarto garoonkeeda sanad gudihii markii ugu horrreysay muddo 35 sano ah.
Naadiga Crystal Palace ayaa guuldarro la kulantay labadii kulan ee ugu dambeysay Premier League waxaana kaga horreeyay todobo kulan oo guuldarro la’aan ah.
Guuldarradii kasoo gaartay Leeds United ayaana ahayd tii ugu horreysay afartii booqasho ee ugu dambeysay horyaalka oo ay kusoo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.
The Eagles ayaa gool laga dhaliyay daqiiqadda 90-aad ee ciyaar ka tirsan horyaalka saddex jeer xilli ciyaareedkan taasoo dhaafsiisay shan dhibcood.